Ikhaya STARS E-EUROPE Ama-Mason Greenwood Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
Ama-Mason Greenwood Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso. Isikweletu ku-IG naku-Wikipedia
I-LB inikeza iNdaba ephelele ye-Football genius eyaziwa kakhulu ngokuthi “Greenwood”. Indaba yethu ye-Mason Greenwood Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sobuntwana kuze kube manje. Ukuhlaziywa kuhilela impilo yakhe esemncane, isizinda somndeni, impilo yomuntu siqu, amaqiniso omndeni, indlela yokuphila namanye amaqiniso amancane - aziwayo ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi ungomunye wabadlali bezinyawo ezinhle kakhulu ebholeni yanamuhla. Kodwa-ke yidlanzana kuphela elibheka iMason Greenwood's Biography okuyinto ethakazelisa impela. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale.
Ama-Mason Greenwood Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
Ukuqala, UMason Will John Greenwood wazalwa ngosuku lwe-1st luka-Okthoba 2001 edolobhaneni laseWibsey eduze kwaseBradford, e-England. Wazalelwa kunina, uMelanie nakuyise u-Andrew.
UMason Greenwood wazalelwa abazali okwaziwa kancane ngaye. Ama-Credits Ama-Image: Ilanga ne-PXhere.
Isizwe saseBrithani sobuzwe obuxutshwe nezimpande zase-Afrika sakhulela endaweni yaso sokuzalwa eWibsey eduzane naseBradford lapho sakhulela khona eceleni kukadadewabo omkhulu - u-Ashton. Ukukhula eWibsey, iGreenwood bekuyingxenye yomndeni eyayizazisa ezemidlalo nabasubathi.
UMason Greenwood osemncane wakhuliselwa eWibsey eBradford. Ama-Credits Ama-Image: Ilanga futhi I-WorldAtlas.
Ngenxa yalokho, uGreenwood wakhula enothando lwebhola futhi wayengumuntu othanda ubuntwana beManchester United lapho akhonza khona izinkanyezi ezifana UWayne Rooney. Ngesikhathi umdlalisi webhola ekhula ngeminyaka eyi-5, waqala ukudlalela iqembu lasekhaya - iWestwood Juniors futhi wabheka phambili ekusaseni elihle kwezemidlalo.
URegwood osemncane ubambe iNdebe yase-Europe ngemuva kokunqoba kwe-United United Kingdom eCanchester e2008. Isikweletu Sezithombe: Ilanga.
Ama-Mason Greenwood Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - I-Education ne-Career Buildup
Ngenkathi edlalela iWestwood Juniors, uGreenwood wafaka umdlalo omuhle owadonsela ukunakekela kwabadlali baseManchester United abagqugquzela ukungena kwakhe esikoleni sokuthuthukisa iklabhu eHalifax.
Kungaleso sikhathi sezemfundo lapho uGreenwood aqala khona ukukhombisa umlingiswa nobuchwepheshe kufaka nokuvuka kusenesikhathi ukuze enze umkhuba, ukukhipha isibhamu esinamandla ngezinyawo zombili kanye nokuqalisa ngokushesha kwanoma iliphi iqhinga alikhonjisiwe.
Ukuthuthuka kukaMason Greenwood esikhungweni semfundo ephakeme e-United bekungxenyeni yemingcele. Isikweletu Sezithombe: Ilanga.
Ama-Mason Greenwood Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
IGreenwood ikhuphuka ngokuqinile lapho ihlangana nentsha yaseManchester, iqopha izibalo ezihlaba umxhwele futhi ingena ekuncintisaneni njengabadlali lapho ingene khona kumncintiswano we-Under-13 owambona ephula irekhodi le-Great Britain 100 amamitha weqembu lakhe leminyaka.
Ekuphakameni komsebenzi wakhe wokuqala, ifomu eliphakeme likaGreenwood lambona evikela ukukhushulwa okuphindwe kabili eqenjini leManchester United elingaphansi kwe18 ngesizini ye-2017-18. Ngenkathi esehlangothini lwentsha, waphothula njengomphathi wamaphuzu aphezulu we-U18 Premier League North ngamaphuzu we-17 emidlalweni ye-21 waphinde waqanjwa ngokuba yi-Player of the Turtle lapho uhlangothi lwayo lunqoba i-ICGT Trophy eNetherlands.
IGreenwood ibimangalisa kakhulu eqenjini le-U18 lase-United yize yenziwa ukweqa ukudlalela iqembu le-U16. Isikweletu Sezithombe: I-DailyExpress.
Ama-Mason Greenwood Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Umlando Wendlela Yokudumisa
I-2018 bekungunyaka lapho uGreenwood aqala khona ukuziqeqesha neqembu lokuqala laseManchester futhi wanikezwa indawo ebhentshini lomdlalo wokugcina weqembu le-Champions League e-United ngokumelene neValencia ngaleso sikhathi owayengumphathi Jose Mourinho. Lowo owayemdala ngaleso sikhathi u-17 uqhubeke nokuhamba neqembu lokuqala le-United ohambweni lwabo langaphambi kwesizini yaseMelika futhi washeshe wenza umncintiswano wakhe ongewona wokuncintisana esikhundleni sikaLuka Shaw ku-1-1 yase-United States edlubhe iClub America.
Njengoba esebonakalise ukuthi ungomunye wamathemba akalwa kakhulu kwi-United's Academy, uGreenwood wanikezwa inkontileka yakhe yokuqala kwi-2nd ka-Okthoba 2018, kodwa-ke, akaze asetshenziswa kumdlalo omkhulu ezinyangeni ezinhlanu ezizayo.
UMason Greenwood usayine inkontileka yakhe yokuqala yokusebenza neManchester United kwi2nd ka-Okthoba 2018. Isikweletu Sezithombe: Manutd.
Ama-Mason Greenwood Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphakama Ukudumisa Indaba
UGreenwood wagcina wenza udweshu wakhe wokuncintisana kwi-6th kaMashi 2019 njengembambela phakathi ne-United 3-1 yokuwina kweParis Saint Germain ku-UEFA Champions League. Njengoba kudalwe, uGreenwood - iminyaka engu-17 ubudala kanye nezinsuku ze-156 - waba ngumdlali wesibili kunabo bonke ukumela iManchester United emqhudelwaneni waseYurophu kanye nomncane kunabo bonke owake waba khona esikhathini seChampions League.
Ngokushesha phambili kuze kube yimanje, uGreenwood ukuqinisekisile ukuqina kwakhe eqenjini lokuqala leManchester United njengethemba eliya phambili nabaningi bemqhathanisa nabadlali abakade bekwenza Robin Van Persie UWayne Rooney futhi Ryan Giggs. Bonke abanye, njengoba bekusho, ngumlando.
IGreenwood izisungulele kakhulu eqenjini lokuqala le-United ukuthi imvamisa iqhathaniswa nezinganekwane zale kilabhu. Isikweletu Sezithombe: I-DailyMail.
Ama-Mason Greenwood Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Imininingwane Yokuphila Ubudlelwane
UMason Greenwood usazoshada ngesikhathi sokubhala. Sikulethela amaqiniso ngomlando wakhe wokuthandana nesimo sobudlelwano bamanje. Ukhulume ngomlando wokuthandana kaGreenwood, kuncane okwaziwayo ngempilo yothando phambili ngaphambi kokuvuka kwakhe ekubeni udumo.
Kwakungenxa kuze kube yi-8th kaJuni 2019 lapho uGreenwood ethumele isithombe sentombi yakhe encane eyayaziwa nge-blonde ku-Instagram. Ngenkathi kusaziwa ukuthi ungubani lona wesifazane ngesikhathi sokubhalwa, kukholakala ukuthi iGreenwood ifisa ukugcina ubudlelwano bayo buba sezingeni eliphansi njengamanje. Okwamanje, akekho noyedwa kulaba duo onamadodana noma amadodakazi noma amakhosazana ngaphandle komshado ngesikhathi sokubhala.
UMason Greenwood nentombi yakhe encane eyaziwayo. Isikweletu Sezithombe: Instagram.
Ama-Mason Greenwood Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso Okuphila Komndeni
UMason Greenwood uvela kwimvelaphi yomndeni osezingeni eliphakathi. Sikulethela amaqiniso ngokuphila komndeni wakhe.
Mayelana nobaba weMason Greenwood: U-Andrew ungubaba kaGreenwood. Ungunjiniyela osebenza esifundeni saseYorkshire ngenkathi umndeni wakhe uhlala eManchester ngesikhathi sokubhala. U-Andrew ube nethonya elihle empilweni yangaphambili futhi uyameseka ngokwesikhundla sobaba.
Mayelana noMason Greenwood mama: UMelanie ungumama kaGreenwood. Usizile ukufaka isandla ekukhuphukeni okuhle kakhulu ekukhuliseni yena ukuthi azithobe futhi asekelwe ekuthini abonakale ekuziphatheni kwakhe namuhla. UMelanie uhlala eduze kwaseGreenwood eManchester njengengxenye yemizamo yokuhlinzekela phambili imvelo efanelekile engamholela kude emsebenzini wakhe.
UMason Greenwood wakhuliswa ngabazali abangisekelayo okwaziwa kancane ngaye. Ama-Credits Wezithombe: ClipArtStation kanye Manutd.
About Mason Greenwood siblings: IGreenwood inodade osekhulile okhonjwa njengo-Ashton. Ungumuntu osakaza amabhuku futhi osebenzela iTrafford futhi ufunda iManchester Metropolitan University emfundweni yezemidlalo ngesikhathi sokubhala. Akangabazi ukuthi usondele eGreenwood futhi onentshisekelo ekuhlanganiseni izikhala.
Mayelana nezihlobo zikaMason Greenwood: Kude nomndeni wakubo kaGreenwood, kuncane okwaziwayo mayelana nogogo nomkhulu wakhe kanye nogogo nomkhulu wakhe. Ngokunjalo, akukho marekhodi wababekazi, umalume, umalume kanye nomshana wakhe ngenkathi abazukulu bakhe bengatholakalanga ezenzakalweni zobudala bakhe esemncane kuze kube manje.
Ama-Mason Greenwood Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso okuphila komuntu siqu
Yini eyenza Mason Greenwood umkhaza? Hlala emuva njengoba sikulethela ukwakheka kobuntu bakhe ukukusiza uthole isithombe esiphelele ngaye. Okokuqala, i-persona yaseGreenwood iyinhlanganisela yezimpawu zobuntu beLibra zodiac.
Ungaphansi emhlabeni, unengqondo, unesibopho futhi akavezi imininingwane ngempilo yakhe yangasese neyangasese. Ngokuphathelene nezintshisekelo nezinto zokuzilibazisa zikaGreenwood, uthanda ukulalela umculo, ukusiphula, ukuthatha izithombe, ukubuka ama-movie nokuchitha isikhathi nabangane bakhe nomndeni wakhe.
IGreenwood ithatha izithambiso zezithombe njengomsebenzi wokuphanga. Isikweletu Sezithombe: Instagram.
Ama-Mason Greenwood Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ama-Lifestyle Facts
Ukubaluleka kwe-Mason Greenwoods kusabhekwa ngenkathi kubhalwa. Kodwa-ke, unenani lemakethe le- € 7,00 Million. Umsuka wenani lakhe elincane eliyaziwayo unesisekelo salo emholweni awuthola ezintweni zebhola ngenkathi ihlaziya indlela aphila ngayo eveza ukuthi uphila ngendlela yokuziphatha eqinile.
Kuyazuzisa ukuqaphela ukuthi iGreenwood akuyona eyokuthola imali enkulu ngesikhathi sokubhala, ngakho-ke ukugxila kubekwe kakhulu ekusebenzeni phambili enkundleni yezemidlalo esikhundleni sokutholwa kwempahla efana nezindlu nezimoto.
Akukho okuningi okwaziwayo ngokuphila kukaGreenwood ngaphandle kwebhola ngesikhathi sokubhala. Isikweletu Sezithombe: Instagram.
Ama-Mason Greenwood Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso angaziwa
Ukusonga umlando wethu wobuntwana weMason Greenwood kanye ne-biography wethula amaqiniso angachazwanga noma angaziwa ukuthi afakiwe kwi-bio yakhe.
UMason Greenwood wazalwa futhi wakhula njengomKristu. Kakhulu-ke, unamagama obuKhrestu kepha akaphumanga ukuzophawula ngezinto eziphathelene nenkolo.
Ungowezwe laseNgilandi futhi usemele iqembu lesizwe lebhola lezinyawo laseNgilandi ngaphansi kwe17 okubandakanya nokuba yingxenye yeqembu eladlala ku-Algarve Tourmet ePortugal.
UMason Greenwood osebenza ezweni lonke neqembu lase-England U17. Isikweletu Sezithombe: I-HITC.
Ingaphambili alinawo ama-tatoo futhi alibonanga ukuphuza ngesikhathi sokubhala. Futhi awunikezwa ukubhema.
Isici esiyisikhulu seGreenwoods izinyawo ezimbili yikhono lakhe lokuthatha izingcezwana ngonyawo olungalungile.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda iMason Greenwood Childhood Indaba yethu kanye ne-Untold Biography Amaqiniso. At LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.